RN7 - FIARA NIFAOKA MPANDEHA AN-TONGOTRA : Maty tsy tra-drano ilay zaza nipotsaka ati-doha
Lozam-pifamoivoizana nahatsiravina no niseho teny amin’ny lalana hivily ho any Tsiafahy lalam-pirenena fahafito iny, ny sabotsy lasa teo, tokony ho tamin’ny efatra ora sy sasany tany ho any. 23 septembre 2019
Raha ny loharanom-baovao voaray dia fiara "mercedes sprinter" iray no fantatra fa nifaoka mpianaka nandeha an-tongotra teny amin’ny sisin-dalana. Vokany, nindaosin’ny fahafatesana avy hatrany ilay zaza rehefa nipotsaka ati-doha, ny reniny kosa nifamonjena haingana tany amin’ny toeram-pitsaboana raha toa ka very ra betsaka sy naratra mafy.
Araka ny nambaran’ny nahita maso ny zava-nitranga dia nandeha mafy io fiara io raha saika nikasa hisongona ny fiara teo alohany. Kinanjo nifatratra tany amin’ny sisin-dalana izay nahavoadona ireto mpianaka ireto. Efa manokatra ny fanadihadiana momba ny raharaha ny eo anivon’ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao.
Tsy mitsahatra mampitandrina ny mpampiasa lalana rahateo koa ny Polisy misahana ny fifamoivoizana satria vokatry ny tsy fanajana ny hafainganam-pandeha hatrany matetika no mahatonga ny lozam-piarakodia misesisesy na eny amin’ny lalam-pirenena izany na anaty tanàna.